Webcams – Category – Windows – Vessoft
Webcams software The caansan waxaa diiradda lagu saaray abuurista ee isgaarsiinta ugu madadaalo on webcam ah. software waxa uu leeyahay tiro badan oo ah saamaynta muuqaalka kala duwan.
English, Français, Deutsch, 中文... TeamTalk 5.1.7
Webcams Isgaarsiinta Voice Tool si ay ula xiriiraan dadka dunida ku. Software wuxuu kuu ogol yahay inaad la xiriirto in hab video shir iyo in ay is dhaafsadaan macluumaadka.
العربية, English, Français, Español... Line 4.10.0.1237
Webcams Chat Tool caan ah oo fariin, samaynta baaqyo iyo abaabulka shirarka video. Software macaamila adeegyada caan ka Yahoo.
Webcams Isgaarsiinta Voice Software lagu wado oo lagu maareeyo xisaab badan Skype on hal computer. Software ayaa awood u si fudud u kala bedesho xisaabaadka iyo xiriiro dhowr ah CHAT waqti isku mid ah.
Clownfish for Skype 4.35 Standard iyo Portable
Webcams Isgaarsiinta Voice software The inuu turjumo farriimaha soo socda iyo xilka ee Skype. software The taageertaa adeegyada caanka ah ee turjumaad la tiro badan oo ka mid ah luqadaha.
العربية, English, Українська, Français... AIM 8.0.10.2
Webcams Chat Isgaarsiinta Voice Tool qoraalka, codka iyo video fariimaha. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u wadaagaan faylasha iyo dar dadka isticmaala in ay xiriirada aad ka codsiyada kale.
Webcams An fududahay in la isticmaalo software kordhisaa fursadaha aad webcam inta lagu guda jiro isgaarsiinta ee CHAT video kala duwan ama Rasuullo.
العربية, English, Українська, Español... PrivalSystems 77.01
Webcams Isgaarsiinta Voice software waxaa diiradda lagu saaray isgaarsiinta ammaan ee internet-ka la jaaniska ugu yar baxsiga xogta shakhsiyeed.